Ny Hunza Valley sy ny angano ny tanora mandrakizay | Vaovao momba ny dia
Ny Hunza Valley sy ny angano fahatanorana mandrakizay
Mariela Carril | | Inona no ho hita, Tsangatsangana
Ny Hunza Valley dia ao Pakistan, firenena iray izay raha ny filazan'ny mpampahalala vaovao tandrefana dia saika helo-pitondrantena. Tsy haiko raha io no toerana mangina indrindra eto an-tany fa indraindray ny fampitam-baovao dia tsy mandefa fampahalalana henjana, ary amin'ny raharaha Pakistan dia betsaka ny mpandeha milaza fa raha ny marina, afa-tsy ny ampahany amin'ny firenena, tena toerana milamina.
Tsy ilaina intsony ny milaza an'izany firenena manana hatsaran-tarehy voajanahary maro izy io ary tantara be dia be, ary ohatra ny Hunza Valley. Angano iray novesatra taminy nandritra ny fotoana kelikely: ny sakafon-tsakafo no mahatonga azy miaina zato taona mahery ny olona ary koa, izany no Shangri-la. Andao hojerentsika izay momba izany.
1 Ny lohasahan'i Hunza
2 Inona no hatao any amin'ny Hunza Valley
Ny lohasahan'i Hunza
Amin'ny avaratr'i Pakistan, 2.400 metatra ny haavony, ary ny reniranon'i Hunza no namorona azy. izany any Giglit-BaltistanFaritra iray fehezin'ny pakistana ankehitriny, be tendrombohitra sy onenan'olona maherin'ny iray tapitrisa izay mizara roa ny foko Burusho sy Wakhi.
Ny renivohitry ny Hunza Valley dia ny tanànan'i Karimabad misy tendrombohitra mihoatra ny fito arivo metatra ny haavony. Mahafinaritra ny sary ka raha tianao izany dia aza hadino ny fotoana hitsidika ity faritra Pakistan ity. Tsy hohadinoinao mihitsy izany.
Ny lohasaha koa dia iray amin'ireo fijanonana lehibe amin'ny làlan'ny angano, ny làlambe Karakoram, na KKH, zotra mihodinkodina 1300 kilometatra miala an'i Abbotabad any Pakistan ka hatrany Kashgar any amin'ny faritanin'i Xianjiang any andrefan'i Sina. Ny sangan'asa dia sangan'asa injeniera sivily tamin'ny taonjato faha-4.800 ary androany no fetra iraisam-pirenena avo indrindra manerantany. Mahatratra XNUMX XNUMX metatra eo amin'ny Khunjerab Pass.
Afaka manofa fiara ianao na mahavita azy amin'ny bus. Ny bisy lavitra avy any amin'ny renivohitra Pakistaney mankany amin'ny firenena dia miainga avy any Rawalpindi, fa tsy avy any Islamabad, manodidina ny 14 kilometatra. Eto dia lehibe sy mikorontana ny gara. Misy bus sy bus mini VIP roa izay miala eto manomboka amin'ny 4 hariva ary tonga amin'ny 6 hariva ny ampitso. Misy fijanonana telo eo ho eo mankany amin'ny trano fandroana ary ny iray hisakafo ary ny polisy dia manakana ny fiara imbetsaka ka mila mampiseho antonta-taratasy ianao.
Gilgit no tanàna lehibe indrindra any avaratr'i Pakistan Ary na dia te-hankany amin'ny Hunza Valley aza ianao izao, dia tsara indrindra ary atolotra anao ny hijanona eto indray alina. Ary io ihany no tranokala misy ATM. Avy eo tonga ny fotoana manakarama jeep na minibus mankany amin'ny lohasaha. Mahafinaritra ny dia miaraka amin'ny fahitana tendrombohitra eny rehetra eny mandra-pahatonganao any Aliabad, tanàna lehibe any amin'ny Hunza Valley. Manomboka eto dia afaka mandray jip iray hafa mankany Karimabad ianao, 20 minitra hafa.
Tokony holazaina fa Karimabad dia tsara tarehy kokoa, eo ambonin'ny Aliabad izy io ary manana fomba fijery tsara momba ny lohasaha ahafahanao mankasitraka ny hakanton'ity tranonkala ity. Ary farany, alohan'ny hiresahana izay azonao atao eto dia tsy maintsy miresaka momba ilay angano milanja eo amin'ny lohasaha isika: ny an'ny fahatanorana mandrakizay. Betsaka ny zavatra nolazaina fa miaina mandritra ny zato taona mahery ny olona eto ary ireo izay 60 taona toa 40 taona ...
Voalaza fa ny antony mahatonga izany dia ny fihinan-dra izay mbola miorina amin'ny voankazo sy legioma manta, voamaina mitsimoka, fromazy pecorino, saika tsy misy proteinina. Ho hitanao fa tsy marary izy ireo, mandro amin'ny rano mangatsiaka amin'ny ririnina sy maro hafa.
fa androany dia nofoanana io angano io satria dokotera Jhon Clark dia nandeha niara-nipetraka tamin'izy ireo nandritra ny herintaona ary avy eo dia naneho hevitra tao amin'ny bokiny fa raha ny marina dia misy olona misoratra anarana aretina mitovy amin'ny mponina hafa ao amin'ilay faritra, fa tsy tantanina amin'ny kalandrie henjana ary tsy kajino avy eo ny nahaterahany araka ny daty nahaterahany fa ny fahendrena na ny fitarihan'ilay olona, ​​ohatra. Voavaha ny angano.
Mazava ho azy, na dia a olona silamo manana fizakan-tena sy fahaleovan-tena betsaka ilay vehivavy ary tsy terena hanao voaly. Tena mahay mamaky teny sy manoratra izy ireo, manana endrika Kaokazy, ary tena sariaka, mahalala fomba ary mandefitra.
Inona no hatao any amin'ny Hunza Valley
Ny iray amin'ireo zavatra voalohany tokony hatao dia ny mianika ireo tendrombohitra manodidina ny lohasaha kely ary mandeha mankany Akany ny voromahery, trano fisakafoanana sy hotely iray izay eo an-tampon'ny havoana iray mitazana ny lohasaha. Ny olona eo an-toerana dia mihambo ho afaka miakatra ao anaty adiny iray nefa raha ny marina dia maharitra adiny telo amin'ny lalana mideza tokoa. Nahaleo ny sarany? Eny, mahatalanjona ny fahitana ny filentehan'ny masoandro ary mendrika ihany koa ny sakafo hariva.
Ho an'ireo hatsarana ireo dia izay Karimabad dia raisina ho Shangri-la. Ho hitanao ... Avy eo eny, afaka manaraka ny arabe amin'ny làlambe mankany amin'ny fiantsonana manaraka ianao Farihy Attabad, adiny iray sisa. Ny farihy dia niforona vao tsy ela akory izay, tamin'ny 2010, rehefa nisy ny fihotsahan'ny tany izay nandevina 19 kilaometatra tamin'ny arabe ary nahafaty olona 600.
Ilay farihy ambiny dia 21 kilometatra ny halavany ary 100 metatra ny halaliny ary tsy afaka hiampitana amin'ny sambo kely afaka 40 minitra fotsiny isika. Dia tsara sy mahafinaritra. Soa ihany fa miasa amin'ny fomba hafa hiampitana ilay tendrombohitra ny Sinoa ka amin'ny ho avy dia azo antoka fa ireo safidy ireo no sambo faharoa. Amin'ny ho avy, anio dia mbola mila miampita toy izao ianao ka hahita jeep sy minivan maromaro eny amoron-tsiraka miandry ny hanohy ny dia mankany amin'ny fiantsonana manaraka amin'ny làlambe Karakoram, ilay tanàna kely misy an'i Passu.
Ao Passu, amin'ny vanim-potoana, azonao atao ny mianika ny Havoana katedraly, traikefa an-tendrombohitra kilasy eran-tany mahafinaritra. Raha tsy izany, eto dia mbola azonao atao ihany ny misafidy ny hijanona amin'ny alina satria misy trano fandraisam-bahiny vitsivitsy sy olona tena sariaka. Farany, afaka aorian'izany ianao araho ny lalana mankany Sost, tanàna iray manamorona ny sisin-tany, ivon'ny fifanakalozana ara-barotra eo amin'i Pakistan sy i Sina.
Ity fitsangatsanganana an-tanàna ka hatrany amin'ny tanàna ity dia azo atao mandritra ny herinandro handehanana amin'ny fotoana sy fitoniana, miaraka amin'ny fotoana hankasitrahana ny hatsarana voajanahary sy ny hatsaram-panahin'ny olona eo an-toerana. Mazava ho saika tsy misy internet na aiza na aiza, noho izany dia fomba tsara ihany koa izy io hialana amin'ny fiankinan-doha amin'ny teknolojia.
Ny fotoana laninao amin'ny Tetezana Hussaini, amin'ny fampiatoana, ny fiampitana ny Paso Glacier izay ahitanao glacier mampatahotra anao amin'ny cone izay mampitovy azy amin'ny katedraly Barcelona, ​​miaraka amin'ny sonian'i Gaudí, sakafo hariva ao amin'ny Akany ny voromahery Amin'ny tendrony fito no jerena, ny fividianana ataonao ao amin'ny Tsenan'ny parasy Karimabad miaraka amin'ny karipetra noforonin'ireo vehivavy eo an-toerana ary farany, maninona, ny sidina safari Manolotra anao izy ireo ary tsy maintsy ekenao ny mankasitraka ny akaiky ny tendrombohitra Himalaya, ny Hindu Kush ary ny Karakoram ...
Fampahalalana tokony hotadidina alohan'ny handehanana mankany amin'ny Hunza Valley
Azonao atao ny manidina mankany Islamabad ary avy eo maka fiaramanidina hafa mankany Gilgit, fiara mandritra ny adiny roa mankany Hunza. Na mandroso amin'ny bisy.
Raha te hitsidika an'i Pakistan dia ilaina ny manodina visa any amin'ny masoivoho pakistaney ao amin'ny firenenao.
Tsy dia misy trano firy ao Hunza, ka ilaina ny famandrihana.
Ny fotoana tsara indrindra amin'ny taona handehanana dia ny aprily ka hatramin'ny oktobra satria amin'ny ririnina dia vitsy ny sidina ary be ny trano hipetrahana manidy ny varavarany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » Inona no ho hita » Ny Hunza Valley sy ny angano fahatanorana mandrakizay
Loharano mafana ao Ourense
Inona no ho hita ao amin'ny Sil Canyons any Galicia